Feverfew - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Feverfew
Feverfew ကို သုံးတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အမြောက်အမြားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့သူတွေမှာတော့ သူဟာ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အတွက်ပဲ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Feverfew ကို ဖျားနာခြင်း၊ ရာသီမမှန်ခြင်း၊ အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ Psoriasis၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ နားအတွင်းအသံကြားနေရခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်းနဲ့ ပျို့အန်ခြင်းတွေ အတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
အချို့သူတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ရရှိဖို့ ခက်ခဲတဲ့အတွက် Feverfew ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူ့ကို သွေးအားနည်းခြင်း၊ ကင်ဆာ၊ အအေးမိခြင်း၊ နားနာခြင်း၊ အသည်းရောဂါ၊ ကလေးပျက်ကျခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့၊ ကြွက်သားတင်းမာခြင်း၊ အရိုးရောဂါများ၊ ခြေထောက်ရောင်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်းနဲ့ အူအတွင်းလေထခြင်းတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။Feverfew ကို ရောဂါပိုးတွေကို သတ်ဖို့အတွက် အရေပြားပေါ် လိမ်းပေးနိုင်ပြီး သွားနာခြင်းတွေအတွက် သွားဖုံးကို တိုက်ရိုက်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Feverfew ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့လေ့လာမှုတွေကတော့ Feverfew မှာ မတူညီတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီး တစ်ခုကိုတော့ parthenolide လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Partenolide (သို့) အခြားဓါတုပစ္စည်းတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အရာတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Feverfew ကို အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားသင့်ပြီး အပူနဲ့ ရေငွေ့ရိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်တဲ့ လက္ခဏာတွေ၊ ပါးစပ်အတွင်း အနာပေါက်မှုနဲ့ ကြွက်သား၊ အရိုးတွေ နာကျင်မှု (သို့) တောင့်တင်းမှုတွေကို သတိထားစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ရှိလာခဲ့ရင် Feverfew ကို အသုံးမပြုသင့်တော့ပဲ antihistamine (သို့) အခြားသင့်လျော်တဲ့ နည်းတစ်ခုခုကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
စီစဉ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်မှု မတိုင်ခင် အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်လောက်ကြိုပြီး Feverfew အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။
Feverfew ကို ကလေးတွေအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေရင်လည်း သူ့ကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ Feverfew နဲ့ ဓါတ်မတည့်သူတွေမှာလည်း အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Feverfewကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Feverfew ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
•	ပျို့အန်ခြင်း၊ အစာမစားလိုခြင်း၊ အရေပြားရောင်ခြင်း
•	ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ တောင့်တင်းခြင်း
Feverfew ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆေးတွေ၊ အပင်တွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
•	သွေးခဲမှုကို တားမြစ်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့ အပင်တွေ (anisindione, dicumarol, heparin, warfarin)၊ antiplatelets ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး
Platelet တွေ စုစည်းခြင်း၊ prothrombin time၊ နဲ့ plasma partial prothrombin time test အစရှိတာတွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Feverfewအတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် နေ့စဉ် 50-100mg ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Feverfew ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Feverfew ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
•	Crude herb (fresh);
Feverfew. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-933-feverfew.aspx?activeingredientid=933&activeingredientname=feverfew. Assessed August 7, 2016.
Feverfew. http://www.drugs.com/cdi/feverfew.html. Assessed August 7, 2016.